आफ्नो स्वास्थ्य लाई ठिक राख्न जाडोमा के खाने के नखाने ? « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
आफ्नो स्वास्थ्य लाई ठिक राख्न जाडोमा के खाने के नखाने ?
१७ पुष २०७५, मंगलवार ०९:२७ मा प्रकाशित
जाडो मौसममा हड्डीलाई न्यानोपन प्रदान गर्न, आफूलाई रुघाखोकीबाट मुक्त राख्न तथा आफ्नो परिवारको प्रतिरक्षण क्षमता बढाउन अनेकौं मौसमी फल एवं तरकारी उपलब्ध छन्, जसको सही उपयोग गरी स्वस्थ एवं फिट रहन सकिन्छ।
जसले जाडो मौसममा शरीरको तौल कम गर्ने चाहना राख्छन् उनीहरूले चिल्लो पदार्थ सेवन गर्नु हुँदैन । उनीहरूको आहारमा फाइबर, फलफूल, सलाद एवं तरल पदार्थ पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्छ ।
अन्न, मल्टिग्रेन आटा, ब्राउन ब्रेड तथा उच्च फाइबरयुक्त बिस्कुट पनि तौल कम गर्न सहयोगी हुन्छन् । अम्बा, गाजर, स्याउ, हरिया सागपात, सुन्तला र काँक्रा फाइदाजनक हुन्छन् ।
घरमा बनेको टमाटर, मिक्स भेजिटेबल र हरिया सागपातको सूप बजारमा पाइने प्याकेटको सूपभन्दा लाभदायक हुन्छ । जाडोमा कतिपय मानिस सोच–विचार नगरी बढी मात्रामा खान्छन् ।
प्राय: मानिसलाई के खाने र कति खाने भन्ने ज्ञान हुँदैन । कम चिनी हालिएको गाजरको खीर खानुपर्छ । जाडोमा गाजरको सेवन गर्नु स्वास्थ्यका दृष्टिले अत्यन्त लाभदायक हुन्छ । सिट्रस फलबाट भरपूर भिटामिन सी प्राप्त हुन्छ ।
यिनको सेवनले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो हुन्छ । यसले रुघाखोकीसित लड्ने शक्तिसमेत प्रदान गर्छ। जाडो मौसममा सामान्य तापमानको भोजन सेवन गर्नुपर्छ।
मुटुका रोगीले तेलयुक्त एवं तारेको खाद्यपदार्थको सेवनबाट जोगिनुपर्छ। नुनको सेवन पनि नियमित मात्रामा गर्नुपर्छ। खाना पकाउँदा संतृप्त बसीय पदार्थको साटो असंतृप्त बसीय पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्छ अर्थात् रिफाइन्ड, जैतुन वा तोरीको तेलमा खाना बनाउनुपर्छ।